F1: Afaka miaraka amin'ny sary famantarana ny mpanjifa ve ny vokatra WPC anao?
A: Eny, raha omen'ny mpanjifa ny sary famantarana azy isika, dia azontsika atao ny mametraka ireo sary famantarana eo amin'ireo fonosan'ny vokatra na manonta azy amin'ny vokatra izay miavaka!
F2: Mandra-pahoviana ianao no hanao bobongolo vaovao ho an'ny vokatra vaovao?
A: Amin'ny ankapobeny dia mila 15-21 andro isika hanamboarana bobongolo vaovao, raha misy ny tsy fitoviana, 5-7 andro bebe kokoa no mila fanovana kely.
F3: Mila mandoa ny sarany amin'ny bobongolo vaovao ve ny mpanjifa? Ohatrinona izany? Hiverina ve io sarany io? Hafiriana no?
A: Raha mila manamboatra lasitra vaovao ny mpanjifa, eny mila mandoa ny sarany amin'ny lasitra aloha izy ireo, dia $ 2300- $ 2800. Ary haverinay io sarany io rehefa mametraka baiko efatra ho an'ny kaontenera 20GP ny mpanjifa.
F4: Inona ny singa ampiasain'ny vokatra WPC anao? Inona avy ireo?
A: Ny singa vokatra WPC misy anay dia 30% HDPE + fibre hazo 60% + Fampidirana simika 10%.
F5: Mandra-pahoviana ianao no manavao ny vokatrao?
F6: Inona ny fitsipiky ny famolavolana ny fisehoan'ny vokatrao? Inona avy ireo tombony?
F7: Inona avy ireo fahasamihafana eo amin'ny vokatrao eo amin'ny mpiara-mianatra?
F8: Iza ireo mpiasan'ny R&D anao? Inona avy ireo fepetra takiana?
F9: Inona ny hevitra R&D momba ny vokatrao?
F10: Inona avy ireo famaritana ara-teknika ny vokatrao? Raha eny dia inona avy ireo manokana?
F11: Inona no karazana fanamarinana efa nolalovanao?
F12: Inona no karazana fanamarinana efa azonao?
F13: Iza amin'ireo mpanjifa no efa nandalo ny fanaraha-mason'ny orinasa?
F14: Manao ahoana ny rafitry ny fividiananao?
F15: Inona ny fenitry ny mpamatsy ny orinasanao?
F16: Mandra-pahoviana ny maodely no miasa mahazatra? Ahoana no hitazomana isan'andro? Inona no fahafaha-manao isaky ny maty?
F17: Inona ny fizotry ny famokarana anao?
F18: Mandra-pahoviana ny ora fanaterana ara-dalàna ny vokatrao?
F19: Manana habetsahan'ny kaomandy farafaharatsiny ve ianao? Raha eny dia inona ny habetsan'ny kaomandy farany ambany?
F20: Inona no fahafahanao manokana?
F21: Firy ny orinasanao? Inona ny sandan'ny vokatra isan-taona?
F22: Inona no fitaovana fitsapana anananao?
F23: Inona ny fizotran'ny kalitao?
F24: Inona ny vokatra azonao? Ahoana no nahatratrarana azy?
Q25: Hafiriana ny androm-piainan'ny vokatra WPC?
F26: Inona ny fe-potoana andoavanao vola ekenao?
F27: Raha ampitahaina amin'ny hazo, inona no tombony azo amin'ny vokatra WPC?
F28: Mila hosodoko ve ny vokatra WPC? Inona no loko azonao omena?
Rihana fametahana WPC, Fanapahan-tsokosoko WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fanesorana ivelany WPC, Fitaovana WPC, Fanesorana WPC ivelany,